Turkey oo qaaday tallaabo kasii dareysa xiisadda Iran
Turkey ayaa xirtay 11 qof oo lagu tuhmayo inay jaajuuseen islamarkaana afduubteen siyaasi mucaarad Iranian ah oo ay dooneysay Tehran, waxaa sidaas Isniintii sheegay booliska Turkiga.
Wakiilo ka tirsan hay’adda sirdoonka Turkiga ee MIT ayaa xiray 11-ka qof oo Turkish ah kadib markii magaalada Istanbul lagu waayey siyaasi mucaarad reer Iran ah oo lagu magacaabo Habib Chaab, sida ay booliska sheegeen.
Habib Chaab oo dibad-joog ahaan ugu noolaa Sweden ayaa boqoday Turkiga bishii October.
Warbaahinta Iran ayaa bishii November weriyey in Habib lasoo xiray, hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan sida uu ugu dhammaaday xabsi Iran.
Tehran ayaa ku eedeysay Chaab inuu ku lug leeyahay koox gooni u goosato Carab ah oo dalkaas ka jirta oo lagu magacaabo ASMLA.
Booliska Turkiga ayaa sheegay in dadka la tuhunsan yahay ay Chaab ka qabteen magaalada Istanbul kadibna ay baabuur Van ah uga gudbiyeen xadka Iran, kahor inta aysan ku wareejin saraakiisha Iran.
Tallaabadan ayaa timi xilli maalmihii dhowaa ay xiisad ka dhex taagneyd labada dal.
Turkey ayaa Sabtidii diiday “hadal aflagaado” ah oo Iran ay la beegsatay madaxweynaha dalkaas Recep Tayyip Erdogan, kaasi oo la xiriira gabay muran dhaliyey oo soo jeedinaya in gobollada waqooyiga galbeed ee Iran ay leedahay Azerbaijan.
Madaxweyne Erdogan ayaa Khamiistii isagoo booqanaya dalka Azerbaijan waxa uu aqriyey gabay ay Tehran sheegtay inuu dhiiri-gelinayo bulshada gooni u goosatada laga tira badan yahay ee dalkaas, ee asal ahaan kasoo jeeda Azerbaijan.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee ISNA, gabaygaas “waa mid ka mid ah astaamaha gooni u goosatada aaminsan Turkish-nimada.”
Mas’uuliyiinta Iran ayaa u yeeray safiirka Turkiga ee Tehran si ay cabasho uga muujiyaan “Hadallada faro-gelinta ah ee aan la aqbali karin” ee Erdogan.
Ayada oo ka jawaabeysa ayaa Turkey waxay u yeertay safiirka Iran ee Ankara, sababo la xiriira sheegashooyin aan “sal lahayn.”
Turkey ayaa kasii dartay Sabtidii, waxaana bayaan kasoo baxay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Fahrettin Altun lagu yiri “Waxaan cambaareeneynaa in hadal aflagaado ah loo adeegsado madaxweynaheena iyo dalkeena, sababo la xiriira gabay la aqriyey, kaasi oo macnihiisa si qaldan loo fasiray.”